नागरिकस“ग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुमा माइतीघर मण्डलामा कहिल्यै धर्ना, विरोध देखिएन तर गोविन्द केसी, गंगामाया“ आदिमा भने सधैं भीडभाड देखिन्छ किन होला ? एकजनाले अस्ती यस्तै जिज्ञासा व्यक्र गर्दै थिए । हुन पनि हो, हगी, बेरोजगारी, असुरक्षा, धुलेमाण्डौंजस्ता जनास“ग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयम कनकमणिदेखि लिएर देवेन्द्रराज पाण्डे, सुन्दरमणिसम्म, चरण प्रसाई, खगेन्द्र संग्रोलादेखि श्याम श्रेष्ठ सम्मले कुनै सरोकार राखेको देखिदैन ।
जब कि यी महानुभावहरु धर्ना माष्टर मानिन्छन् । किन त यस्तो ?
प्रष्ट छ, महगी बेरोजगारी, धुलोधुवा“जस्ता समस्याहरुका लागि यहा“का दाताहरुले निकासा दिदैनन् । गोविन्द केसी, गंगामाया“हरुको सवालमा ठूलै नगदनारायणको व्यवस्था हुन्छ । त्यसकारणले अमूक समस्यामा मात्र माइतीघर मण्डला सिंहदरवारको वरिपरि केही विशिष्ट व्यक्ति अनि नितका आसेपासेहरु भेला हुनछन्, एकाध घण्टा नारा लगाउ“छन्, मानवाधिकारको मुद्दा उछाल्छन्, प्रहरीलाई गिरफ्तारी दिन्छन्, दुई चारघण्टामा छुट्छन्, प्रचारवाजी ठूलै गर्छन् । ०४६ सालपछि यस्तै रित चल्दै आएको छ । त्यसो त अहिले नेपाली कांग्रेस भनाउ“दो दललाई पनि यी दुई मसलामा चासो जागेको छ । अघि आफ्नो सरकार हु“दा समस्यालाई ज्यू“का त्यू“ राख्ने कांग्रेसलाई अहिले गंगामाया“, गोविन्द केसीहरुले उठाएका मा“ग पूरा हुनुपर्ने लागेको छ । तिनलाई भेट्न वीरअस्पतालदेखि जुम्लासम्म पुग्यो कांग्रेस । हिजोको कांग्रेस र आजको कांग्रेस, स्पष्ट भएन ?
दुई तिहाईको विश्वासमा गजधम्म बसेको ओली सरकारले तत्कालीन देउवा सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ती खारेज गरेर कांग्रेसलाई जोल्ट दिएको छ । यसबाट कांग्रेस तिलमिलाउन पुगेको देखिन्छ । सभापति शेरबहादुर देउवा शेर गर्जेझैं गर्जे पनि । ओली सरकारको अधिनायकवादी शैलीविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म तताउन कांग्रेस एकाएक जुर्मुराएको छ ।
सा“चो कुरा के हो भने कांग्रेसस“ग सरकारलाई घेर्ने, आलोचना गर्ने र जनताको मन छुने खालका कुनै मुद्दा नै छैनन् । कांग्रेस कति असक्षम भइसकेछ, स्पष्ट छ । पक्षाघातको विरामी अवस्थामा पुगिसकेको छ कांग्रेस ।
यता विप्लव माओवादीले आजै असार २६ गते कर्णाली बन्दको आह्वान गरेको छ आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई धरपकड र तिनीहरुलाई दमन गरिएको विषयमा यो बन्द घोषणा भएको हो । महगी, बेरोजगारी, धुलोधुवा“, कूशासन लगायतका विषयलाई लिएर कहिले कुनै आन्दोलन हुनसकेको छैन । गत हप्ता मात्र सुस्ताबासीले घरखेत डुबानमा परेपछि भारतले बनाएको गण्डक बा“धको नहर नै भत्काएर घरजग्गा बचाए । जुन काम सरकारले विपक्षीले, विद्रोहीले गर्न सकेनन्, जनताले गरे । भारतले किन ज्यादति गरिरहेछ, किन हस्तक्षेप रोक्दैन भनेर कुनै पार्टी, सरकार, नेता, नागरिक समाजका अगुवा बोल्दैनन् ।
हो, गोविन्द केसी, गंगामाया“का विषयमा पनि बोल्नुपर्छ । विधिको शासन चाहने र न्यायका पक्षमा उभिने जो कोहीले यिनको तपस्यालाई कम आ“क्नु हुन्न । तर, यिनलाई पनि बेयरर चेक भजाएजसरी भजाउने एनजीओवादी, आफ्नो दुनो सोझ्याउन खोज्ने कांग्रेस, कडा खबरदारी गर्न नसक्ने मानवाधिकारवादी, मरे मरुन् भनेर दुई तिहाईको दम्भ देखाउने सरकार, यसले मुलुकमा दण्डहीनता र अविश्वासको खाडल नराम्ररी बढाएको छ । को छ देशभक्त, सुशासन चाहने । सबै आआफ्ना शुभलाभका लागि मरिहत्ते गरिरहेछन् त ? यिनै जनवादी नामका व्यक्तिहरु देश बर्बादीमा सहयोगी बनेका छन् ।
लाभ हुन्छ भनेरै बिना जनस्वीकृति धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरियो । यसमा डलरबो दबाबबाहेक अरु के थियो र ? धर्म, जाति, लिङ्ग, भाषा, भेष, भेगमा विभाजन र बिखण्डनका बीउहरु छरिएका छन् । यस्तो अकर्मण्य राजनीतिले देश स्वर्ग बन्छ, समृद्ध हुन्छ, सुशासन आउ“छ भनेर ठान्नु भूल हुनेछ ।
जे गर्नुपर्छ, स्वयम् जनता अघि सरेर गर्ने हो भने केही होला, अन्यथा भ्रष्ट राजनीतिक सुनामीले देश र जनजीवनलाई धुस्नु बनाउने बाहेक अरु केही हुनेछैन । यिनले खडा गरेको साम्राज्यमा शोषणमात्र हुनेछ, अरु केही हुन्न । नागरिक समाज हु“ भनेर फुइ“की लाउने देवेन्द्रराज पाण्डे, सुन्दरमणि, कनकमणि, खगेन्द्र संग्रौला, रवीन्द्र मिश्र, चरण प्रसाई, श्याम श्रेष्ठ मार्काहरुले होस् पु¥याउने, तिनको पनि जनताले लेखा राखेको छ, परीक्षण गर्नेछ । गरिरहेको छ ।
र, देशमा काम कम, कुरा बढी गरेर डढेलो सल्काउने एनजीओ, आइएनजीओहरुलाई पनि जनताले छाड्नेवाला छैनन् । समय रहदै सोचुन् । यी के हुन्, को के रहेछन्, आम नेपालीले सबै बुझिसकेका छन् । जनता चुप लागे भनेर हेप्ने प्रवृत्ति अन्त नभए, कुनै पनि बेला जनविस्फोट हुन बेर छैन ।